Aasaaska ciidanka badda Itoobiya, cabsida Soomaalida iyo xuquuqda sharciga caalamigu siiyey waddamada aan baddaha lahayn (Land Locked States) | Gabiley News Online
W.Q: Mustafe Maxamuud Daahir.
Wararka la xidhiidha la wareegida baddaha Soomaalidu leedahay, wuxu dhagaha Soomaalida gubay, xanuun gaar ahna ku reebay, ka dib markii masuul sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Itoobiya wareysi siiyey wargeys wadankooda kasoo baxa, oo si cad ugu sheegay hadal u dhignaa sidan ‘’waa in aanu tusna adduunka saameynta aanu badda ku leenahay,waxaanu nahay waddan weyn oo boqol milyan ka badan, ma jirto sabab aanu ugu sii jirno bad la’aan, sida waxa yidhi General Berhanu Jula oo ah taliye xigeenka ciidamada qalabka sida ee Itoobiya’’.
Ciidamada badda ee Itoobiya waxa marki ugu horeysay lala asaasay ciidamada milatariga 1950neeyadii, iyagoo ahaa laan ka mid ah ciidankaa. Waxa asaaska ciidankan iska lahaa boqorkii xilligaa xukumayey Itoobiya ee la odhan jirey ‘’Haileselassie ‘’ Inta badan Afrika waxay xilligaa ku jirtey gumeystayaashii reer galbeedka,wallow markii danbe laga hoos saarey ciidankamilateriga Itoobiya oo laga dhigay ciidan iskii u taagan, isla markaana ka madax banaan ciidamada kale, muddo ku siman afar sanno ka dib taarikhda hore.
Sannado ka dib aasaaskii ciidanka badda, Itoobiya waxa lagu qiyaasay iney leedahay ilaa 3000 kun oo ciidamo badda ah oo xooggan oo dhamaantoodwada raga ah, oo ka ugu yar jiro 17 sanno. Markabkii ugu horreeyey ee ciidamadan yeeshaan waxa siiyey ciidamada badda ee dalka Mareykanka, wallow ay ahayd deyn uu damiin ka ahaa Talyaanigu. Taarikhdu waxay ahayd xilligaa 2dii Jeenaweri, 1957kii. Markabkaa waxa la odhan jiray ‘’Zerai Deres,’’
Waxay sidoo kale Itoobiya hoosta ka xariiqday, in mar kasta marrin biyoodka badda cas oo ah halka ay maanta wax u soo maraan uu yahay mid ammnigiisi jilicsan yahay, isla markaana loo baahan yahay in mas’uuliyadda/tirada lagu darsado hawlaha socda, iyadoo marka kasta Itoobiya maanka ku heysa danaheeda dhaqaale iyo baahida bulsho ee dalkeed ka jirta.
Sabaha aan sare ku xusay, waa kuwii muuqday amase ba la arkayay,wayse dhici kartaa in la arko kuwo qarsoon oo aan la ogeyn amase aan si guud hadda u muuqan, arrimo ciidan dartood.
Waxay haddaba (wakhti xaadirkan) ku sugan yihiin ciidamo Itoobiya meelo badan oo dhulka ka mid ah dhulka Soomaliya, iyaga oo gala xuduuda waddanka [Somaaliya] wax xurmaha ahna aan u hayn madax-bannaanida dhuleed iyo baddeed ee Soomaliya. Way adagtahay ninka aan xurmo u heyn midda dhuleed inuu xurmo u hayo tan badda. Waxay sidoo kale Itoobiya awood iyo galangal ba u leedahay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, waxaanay tageertaa maamulada ka Soomaaliya iyo shakhsiyo kale oo xil haya , soo qabtay ama imika doonaya inay madax noqdaan oo lagu xanto inay siyaasaddeed ku socdaan.
Midda ugu danbaysa ee la hubaa ayaa ah in marka Itoobiya ciidamadeeda badda yagleesho, meesha u noqon doonta fadhi (Naval Base) ee ay ka duuli doonaan, kana hawl geli donaan. Waxa hubaal ah oo aan daah cidna ka saarnayn, in ciidankaa uu fadhigiisu noqon doono magaalo ka baxsan Itoobiyada maanta layaqaan ee bilaa badda ah, taaso noqon karta magaalo xeebeed ku dhereran badda cas ama badweynta Hindiya. Sababtoo ah ma jirto ujeedo ciidan baddeed u fadhiyo magaalo aan bad lahayn,oo shaqadiisa ayaan soconeyn, sifihiisa ciidannimona ma dhamaystirna ilaa uu gaadho dhul xeeb ah oo bad leh, si uu waajibkiisa shaqo u guto.
Itoobiya waxay heshiis hor’umarinta 4 dekedood ah la gashay Soomaaliya, sannadkii hore, faahfaahinna lagama bixin heshiiskaa. Sidoo kale, Itoobiya waxay saami mar dambe loo gooyay ku leedahay dekedda Berbera oo u ah isha dhaqaale ee ugu weyn Somaliland. Inkasta oo axdiga qaramada midoobay, weliba shuruucda caalamiga ahi ba si cad u tilmaamayaan, isla markaana ilaalinayaan madax-bannaanida dhuleed oo ay soo hoos gelayso mid baddeed adduunka, haddana xoogga, dagaalka iyo khiyaamada danaha ku saleysan, waa dookhyo aan la inkiri karin oo adduun weynaha weli ka sii jira.
Waa muhiim in la ogaado badda ma waxa ka faa’ideysan kara oo qudha waddamada leh, mise xataa waddamada aan baddaha laheyn ayaa xuquuq ku leh. Markaa weeyi marka aynu ogaan karno cidda innagu soo xad gudubtey iyo cidda xaqeedi sharcigu siiyey ku kooban.
Xaqa ama xorriyada ku gooshitaanka badda si nabad ah.
Waddamada aan baddaha lahayn waxay xorriyad u heystaan inay ku gooshaan, isla markaana ku socdalaan baddaha waddamada leh si nabad ah (innocent passage) iyagoo shuruud looga dhigey iney heshiis kala galaan waddankaa ay markaa baddiisa ku socdalayaan, isla markaana wuxu sharcigu faraya inay qaadaan talaabo kasta oo ay ku ilaalinayaan sharciga waddankaasi,isla markaana kaga hortgayaan sharci jabin ka dhan ah waddankaasi ay baddisa ku jiraan. Sida ku cad 125, ee isla xeerkan.
Marka la joogo aag biyoodka u gaar ah dhaqaalaha (Exclusive EconomicZone) oo cabbirkiisu yahay 200 nautical mile, kana soo bilaabma barta ay badda ka soo bilaabanto xagga dhulka, waddamada baddaha leh iyo kuwa aan lahayn, waxay si isku mid ah ugu raaxaysanayaan xaq isku mid ah iyagoo sameysan kara ku safrid aan shuruud laheyn, ku dul duuli kara, si bilaa shuruud ah, dhigan kara xadhkaha waaweyn ee internet ama aad u adeegsan kartid cilmi baadhista. Waxay sidoo kale waddamadu si siman uga faa’ideysan karaan kheyraadka badda oo dhan, haddii ay tahay kalluumeysi,shidaal ama kheyraad kale oo markaa muhiim u ah ilaha dhaqaale oo laga heli karo aaggan.
Waxaan ku soo gebo-gebonayaa xuquuqda aag biyoodka badda calaamiga ah ee loo yaqaan (High Sea) ay ku leeyihiin waddamada aan lahayn baddaha. Aag biyoodkan waa mid u wada furan waddamada adduunka oo dhan, wuxuuna ka baxsan yahay aag biyoodka dhaqaale, 200 nautical mile wixii ka baxsan weeyi macnaheedu Waddamadu aag biyoodkan waxay ku leeyihiin 6 xuquuqood oo waaweyn oo kala (1) Xaqa inaad si xor ah u mushaaxi kartid aaggan. (2)xaqa inaad ku rakibi kartid beebab ama xadhko cilmi baadhis ama dhaqaale kaasoo gelayo. (3) Xaqa inaad ka sameysan karto jasiirado ama goobo dalxiis oo aad adigu iska leedahay. (4) Xaqa inaad si xor ah u dul mushaaxi karto, gaar ahaan gadiidka circa ee aad leedahay. (5)Xaqa inaad si xor ah uga kalluumeysan karto, iyada oo aan cidna waxbaa ka rabin, si wafaqsan sharciga caalamiga. (6) xaqa aad u leedahay inaad ku sameysan karto cilmi baadhsiyo baddaha weynta.
United convention law of sea,(Unclos)
1982, dhaqan-gelay noofanbar 1994.
Xuquuqda ay leeyihiin wadammada aan baddaha lahayn, ee ay daabacdey mareegtan March 18, 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ss)
Weraysiga ku daabacan wergeyska addis standard 7, noofanbar,2018. ee uu bixiyey General Berhanu Jula